Q/Midoobay oo dhowaan danjire cusub u soo magacaabeysa Somalia ka dib markii uu waqtigii ka dhamaaday Mahiga | Anti-Tribalism
← Liiska Magacyada Ka Qeyb Galayaasha Shirka LONDON iyo Dowladaha Ay Ka Socdaan:
War deg deg ah: 278 Xildhibaano sheegey in uu shirqool ahaa shirkii Garoowe →
Warar lagu kalsoon yahay oo laga soo xigtay saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya la bedelayo dhawaan, ka dib markii uu dhamaaday waqtigii uu ka shaqeyn lahaa Somalia. Sida warku sheegayo bisha Maarso ee soo socota bartamaheeda ayey ku egtahay xilliga howsha Soomaaliya uu ka hayo sii wadayo, waxaana la sheegay inaan dib dambe loogu cusbooneysiinaynin marka uu waqtigiisa dhamaado, lana doonayo in booskiisa lagu bedelo sarkaal kale oo ka tirsan Qaramada Midoobay, kaas oo aan la magacaabin halka uu ka imaanayo iyo dalka uu ka soo jeedo midna.
Warku wuxuu intaasi ku darayaa in haatan Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay uu baadi-goob ugu jiro ninkii bedeli lahaa Mahiga, iyadoo ay jiraan xubno sarsare oo ka tirsan dowladda KMG iyo dalalka deriska oo u ololeynaya inuu sii joogo, waqtigana loo cusbooneysiiyo mar labaad.
Bedelaadda Augustine Mahiga ayaa haddii ay hirgasho waxay ku soo aadeysaa iyadoo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka KMG Soomaaliya ay horey uga dalbadeen Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay inuu Soomaaliya ka bedelo Mahiga oo ay eedeeymo kala duwan u jeediyeen, halka Madaxda sare ee dowladda KMG ay ka soo horjeesteen warqaddaasi ay Xildhibaanada qoreen, kuna sheegeen mid ay soo qoreen dad dano gaar ah wata.
Augustine Mahiga ayaa ah danjirihii ugu khilaafaadka badnaa intii ay jirtay dowladda KMG, maadaama intii uu shaqada hayey ay dhowr jeer madaxa isla galeen madaxda sare ee dowladda KMG. Xukuumadda iyo xildhibaanada Baarlamaanka, waxaana si weyn loogu xusuustaa heshiiskii Kampala ee khilaafka badan dhalliyey iyo qorshihii Road Map-ka oo ay xildhibaano badan ka soo horjeedaan.
Xil ka qaadista Mahiga ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Mahiga uu la saftay garab ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka KMG, halka xildhibaanada garabkii kale ay dhowr-jeer oo hore dacwad ka gudbiyeen, taasoo aan la ogeyn inay saameyn ku leedahay diidmada ah inaan waqtiga loo kordhin, marka uu dhamaado waqtigiisa oo ku eg bisha soo socota.